चाक्सीबारीमा सिर्जना सिंहको कुकुरले टोकेर पुण्य गौतम घाइते, कसैले ‘सरी’ सम्म नभनेको गुनासो – Nepal Press
‘प्रहरीमा केस गर्न जाउँ कि भन्ने सोच्दैछु’
२०७९ वैशाख २३ गते १२:४२
काठमाडौं । नेकपा एसका नेतासमेत रहेका सामाजिक सञ्जालका भाइरल म्यान पुण्य गौतम गत बिहिबार प्रकाशमान सिंह र सिर्जना सिंहलाई भेट्न चाक्सीबारीस्थित उनीहरुको निजी बंगलामा पुगे । राजनीतिक प्रयोजनले त्यहाँ पुगेका उनी शरीर र मनमा गहिरो चोट लिएर फर्किनुपर्यो ।
सिंह दम्पत्तिसँग समय लिएरै गएको भए पनि पुण्यलाई घरभित्र प्रवेश नगराइकन कम्पाउण्डमै राखिएको थियो । कम्पाउण्डमा प्रकाशमानका छोरा प्रभासमान सिंह थिए । प्रकाशमान घरभित्रै थिए भने सिर्जना घरबाहिर निस्किएकी थिइन् ।
गौतमले सुनाए, ‘हामीलाई बैठक कोठामा नलगिकन कम्पाउन्डमै रहेको कुर्सीमा राखियो । त्यहाँ दुईवटा अजंगका कुकुर देखेपछि मलाई सुरुमै डर लागेर तिनीहरुलाई बाँध्न भनेको थिएँ । तर कसैले वास्ता गरेनन् ।’
कुराकानीकै दौरान पुण्यको फोन आएपछि उनी कुर्सीबाट उठेका थिए । फोनमा कुरा गरिरहँदा अचानक पछाडिबाट एउटा कुकुरले झम्टिएको उनले सुनाए ।
‘सुरुमा मलाई खुट्टामा क्वाप्पै टोक्यो । धन्न मैले जिन्स पाइन्टभित्र ट्राउजर लगाएको थिएँ र ठूलो घाउ भएन,’ उनले भने ।
पुण्यका अनुसार उनलाई टोकिसकेपछि एकजनाले मजाक गर्दै भनेका थिए, ‘यो कुकुरले ७२ जनालाई पहिल्यै टोकिसकेको छ । तपाईं ७३ नम्बरमा पर्नुभयो ।’ यसो भन्ने व्यक्ति भने उनले चिनेनन् ।
पुण्यलाई कुकुरले टोकेपछि हल्लाखल्ला सुनेर प्रकाशमान घरबाट बाहिर निस्किएका थिए । तर, उनले गौतमप्रति खासै सहानुभूति दर्शाएनन् ।
‘बाहिर आएर ल के कुरा हो गरौं न भन्नुभो । मैले तपाईंको कुकुरले भर्खर मलाई टोक्यो, एकदमै पीडा भइरहेको भनेर सुनाएँ । कहाँ छ अस्पताल भनेर पनि सोधेँ । तर, उहाँले कुनै महत्व नदिइकन ‘ए अँ अँ’ मात्रै भन्नुभयो । जबकि मेरो कोटबाहिरै रगत देखिएको थियो,’ उनले भने ।
कुकुरको टोकाइले घाइते भएपछि उपचारका लागि गौतम गणेशमान सिंह मेमोरियल अस्पताल पुगे । तर, त्यहाँ पनि राम्रो व्यवहार नभएको उनले बताए ।
‘म गणेशमानजीको स्मृतिमा खोलिएको अस्पतालमा म गएँ । उहाँहरुले त मच्छडले टोकेर आएजस्तो व्यवहार देखाउनुभयो,’ गौतमले भने, ‘प्रकाशमान सिंहको घरको कुकुरले टोकेको भनेर जानकारी गराउँदासमेत गतिलो रेस्पोन्स गरेनन् ।’
उनलाई पाँचवटा रेविजको र एउटा टिटानसको सुई लगाउन भनियो । एउटा सुईको पाँच सय पर्ने बताइयो ।
त्यसपछि गौतमले टेकु अस्पतालमा तीनवटा सुई लगाउँदा हुन्छ, यहाँ किन पाँचवटा भन्ने प्रश्न गरेका थिए । त्यसपछि उनलाई भनियो– त्यसो भए टेकु नै जानु ।
उनी पनि घाउ बोकेर टेकुतिर लागे । टेकु अस्पतालमा उनले टिटानस र रेविजको पहिलो डोज लगाएका छन् । रेविजको थप दुई डोज लगाउन बाँकी छ ।
कुकुरले टोकेको घाउ दुखेर खपिनसक्नु भएको पुण्यले सुनाए ।
‘हिजो राति त हनहनी जरो आएर झिम्मिकै निदाउन सकिनँ,’ उनले भने ।
घरको कुकुरले अतिथिलाई टोकेर घाइते बनाएपछि अस्पताल पुर्याएर उपचार गरिदिनु घरबेटीको कर्तव्य हो । तर, आफूलाई उपचार त परको कुरा सामान्य क्षमायाचनाको औपचारिकतासमेत पुरा नगरिएकोमा पुण्य दुखी छन् ।
आफूले माथि र तल तीनवटा लुगा लगाएको भएर घाउचोट कम भएको उनले बताए ।
‘पाखुरा नांगो भएको भए मासु नै लुछेर लैजाने रहेछ,’ गौतमले भने ।
उनले सिंह दम्पत्तिविरुद्ध प्रहरीमा केस गर्ने विचारसमेत गरिरहेका छन् ।
प्रकाशमानको घरमा पालिएका कुकुर विदेशी नश्लका हुनसक्ने पुण्यको अनुमान छ ।
‘अहिले काठमाडौंको भीआइपीको घरमा ब्वाँसोसँग क्रस गरिएको कुकुर पालिन्छ । यस्ता कुकुरमा कतिबेला कुकुरको र कतिबेला ब्वाँसोको स्वभाव आउँछ थाहा हुँदैन । उहाँहरुले पालेको कुकुर पनि नेपालीजस्तो थिएन । सायद यस्तै क्रस कुकुर हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
आफूलाई सिर्जना सिंहको कुकुरले टोकेको जानकारी दिँदै पुण्य गौतमले राखेको टिकटक भिडिओ :
#punyagautam #punyagautamofficial #trendingvideo #viralvideos #tiktoknepal #srijanasingh #prakashmansingh
♬ original sound – Punya Gautam Bishwas
प्रकाशित: २०७९ वैशाख २३ गते १२:४२
One thought on “चाक्सीबारीमा सिर्जना सिंहको कुकुरले टोकेर पुण्य गौतम घाइते, कसैले ‘सरी’ सम्म नभनेको गुनासो”
Kangres ko charitra yastai hunxa so. Kangres malai man pardaina.
त्रियुगाको मत गन्न थालियो, प्रारम्भिक परिणाममा कांग्रेसको अग्रता